Shina Solar Street Light mpanamboatra ary mpamatsy - Langxu Lighting.
Light Street Solar vita amin'ny famolavolana plastika vita amin'ny plastika polycarbonate, tanjaka avo, hazavana tsara; ny fampiasana LED ho loharano maivana, ary ny LED dia jiro miora, ary manana toetra mampiavaka ny fahaiza-manao ambony sy ny fiainana lava.Ao ankehitriny, ny jiro solar dia mamolavola toy ny jiro ara-jiro ho an'ny haino aman-jery vaovao.
Famaritana bateria an'ny tarehin'ny hazavana an'ny Solar Street: Ny bateria gel dia afaka mitondra famoahana overfull na famoahana be loatra, afaka mahazaka horohoro, fanoherana ny fahatairana, Fiainana fitahirizana lava. Fangaro kalitao alloy kalitao sy ny endrika elektrikazy tokana, teknolojia fanodinana sy famokarana tonga lafatra, Ataovy ny bateria manana fahaiza-manao be, ny fihoaram-peo lalina, ny fahafaha-manaiky ny fahafaha-mihena, ny mari-pana manomboka ny fahafaha-mihena, ny fisondrotam-tena ambany, ny tsara fanefena amin'ny fiovan'ny mari-pana, ny toetran'ny fiainana lava sy ny sisa. Ny tombo-kase fiarovana dia tsy mila asidra na rano mihazona azy, tsy mitroka asidra, Tsy maimbo asidra, fandotoana ny tontolo iainana.
* Kilasy fiarovana: IP68, vovoka-porofom-pahombiazana ary porofo amin'ny rano
* raharaha matevina vita amin'ny aluminiana matanjaka sy matevina, fanoherana ny vatohara
* fe-potoana efatra mifehy (fametrahana lehibe, fiampangana mahery, fitoviana, fiampangana mitsingevana)
* Fanaraha-maso ny hazavana tokana sy avo roa heny
* Setra mpanamory fitarafana lavitra (CU) napetraka, fahatsorana ary mora ampiasaina
* Sata LED
Buy Solar Street Light nyvy nymin'ny Lnyngxu Lighting mpnymnytsy nyry mpnymoknytrny, isikny mnynnynny ny betsaka ny fomba Solar Street Light ao amin'ny staoky. Welcome ny fitsaharana nyssured ny wholesnyle nyry cusnymized Solar Street Light Style nyvy nymin'ny ny fnycnyry, isikny dia manome ianao amin'ny chenyp pricelist nyry tsara indrindra quotnytion for ianao.